Hello Nepal News » बार्सिलोनाको क्लब इतिहासकै बेस्ट खेलाडी को ? : फ्यानहरूले छानेनन् मेस्सीलाई !
बार्सिलोनाको क्लब इतिहासकै बेस्ट खेलाडी को ? : फ्यानहरूले छानेनन् मेस्सीलाई !
एजेन्सी, चैत १५
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सी विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक खेलाडी भएकोमा दुईमत छैन । कतिपयले उनलाई फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा महान् मान्छन्, कतिले मान्दैनन् । तर, उनलाई सबैले महान्मध्ये एक चाहिँ बिनाशंका मान्छन् । प्रतिभा, सफलता र व्यक्तिगत तथ्यांकले पनि मेस्सी इतिहासकै एक महान् खेलाडीका रूपमा दर्जमा भइसकेकोमा हुने कुनै शंका नै छैन । ६ पटक बालोन डिओर अवार्ड विजेता मेस्सीलाई अहिलेको पुस्ताले झनै रुचाउँछ । भलै, अर्जेन्टिनामा उनलाई बार्सिलोनामा जति उच्च सम्मान दिँइदैन । तैपनि, मेस्सीको महानतामा कुनै शंका छैन ।
मेस्सीलाई फुटबल इतिहासकै सर्वकालीन् महान खेलाडी मानिरहँदा बार्सिलोनाकै फ्यानले भने उनलाई क्लब इतिहासकै सबैभन्दा महान् खेलाडीका रूपमा पनि छानेका छैनन् । चर्चित संस्था ‘र्यांकर’ले बार्सिलोनाका विश्वभरका फ्यानलाई क्लब इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी छान्नका लागि खुला गरेको अनलाइन भोटिङ नतिजा प्रकाशित हुँदा मेस्सी पहिलो स्थानमा परेनन् । फ्यानले क्लब इतिहासकै सर्वश्रेष्ठ महान खेलाडीका लागि भोटिङ गर्दा मेस्सी दोस्रो स्थानमा मात्रै रहेका छन् । उनीभन्दा अगाडि सन् १९९० मा बार्सिलोनामा स्टार खेलाडी रहेका ह्रिस्टो स्टोइचकोभ रहेका छन् । उनका लागि फ्यानले मेस्सीलाई भन्दा करिब ५ हजार बढी मत दिएर पहिलो स्थानमा छानेका हुन् । स्टोइचकोभ बार्सिलोनाका अर्का महान र लिजेन्डरी खेलाडी जोहान क्रुफकै पालाका एक मुख्य खेलाडी हुन् । स्टोइचकोभ पालामा बार्सिलोनाले ऐतिहासिक रूपमा लगातार चारपटक ला लिगा उपाधि जितेको थियो, त्यो समय सन् १९९१–१९९४ सम्म थियो ।
मिडफिल्डर र फरवार्ड दुवै पोजिसनबाट खेल्ने स्टोइचकोभकै कमान्डमा बार्सिलानाले सन् १९९२ मा च्याम्पियन्स लिग (त्यसबोलको युरोपियन कप) पनि जितेको थियो । स्टोइचकोभले व्यक्तिगत रूमा उत्कृट प्रदर्शन गदै सन् १९९४ को सालको बालोन डिओर अवार्ड पनि जितेका थिए । बुल्गेरियाका खेलाडी उनले फरक–फरक समयमा खेल्दै कूल २५५ खेलबाट ११७ गोल गरेका थिए । उनी हाल ५५ वर्षका छन् । स्टोइचकोभ एक महान् खेलाडी भएकोमा शंका छैन । तर, के उनी मेस्सीभन्दा पनि महान् हुन् त ? यो भोटिङ नतिजाले भने मेस्सीको खेल खेल हेरेर हुर्किएको पुस्तालाई पक्कै चित्त बुझाउन सक्दैन होला ।
अनलाइन भोटिङमा कूल १ लाख ४० हजार फ्यानले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा स्टोइचकोभले सर्वाधिक मत पाएका छन् । फ्यानले स्टोइचकोभलाई क्लब इतिहासकै सर्वकालीन महान् खेलाडीको रूपमा छान्दा पूर्वकप्तानहरू जाभी, आन्द्रेस इनिएस्टा, जोहान क्रुफ पनि टप–५ मा परेका छन् । शीर्ष–२० मा हाल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षक समेत रहेका रोनाल्ड कोम्यानदेखि पूर्वखेलाडी लुइस स्वारेज पनि रहेका छन् । हालका पहिलो रोजाइका गोलकिपर मार्क आन्द्रे टर स्टेगेनदेखि दिवंगत खेलाडी डिएगो मोराडोना पनि टप–२० मा छन् । हेरौं फ्यानले छानेका टप–२० खेलाडीको सूची–
प्रकाशित मिति १५ चैत्र २०७७, आईतवार १२:३५